Hawlaha beni`aaddminimo, waa mas`uuliyad aan xudduud lahayn. Meel kasta oo dunida dacalladeeda dhibaato ka dillaacdo, waa in hawlaha beni`aadminimo ay ka jawaabaan. Taas caksigeeda, siyaasaddu waxay taqaannaa xuduudaheeda, halkii dhibaato ka dhillaacda, siyaasaddu waxay uga jawaabtaa siyaabo kala dduwan oo ku xiran hadba xiriirrada taariikheedd, iskudheellitirnaanta awoodaha, iyo isku miisaamidda danaha kala duwan. Waqtiga iyo bedka (Space) hawlaha beni’aadaminimo ma ahan kuwii siyaasaddu ay lahayd. Kuwaasi aad bay u kala duwan yihiin arrimo kala duwan dartood, taasina waa si kale oo lagu garto mabaadii`da aas-aaska u ah hawlaha beni`admino.oo ah “in la diido xal kasta oo ku tumanaya xuquuqda qaarka tabarta daran”. “waa in qofna aan si ula kac ah loo faquuqin ama loo dayicin iyadoo loo hurayo danaha iyo najaxidda mid kale”. Hal naf oo manta joogta laguma cabbiri karo faa`idadeeda berri ah; hawlaha samafal ee “halkaan” ka socdaana ma sharciyayn karaan in la dayaco hawlaha samafal ee “halkaas” looga baahan yahay. Dabiiciyan xaddadnaanta waxa la heli karaa waa in ay saldhig u noqdaan kala doorashada (choice) meesha wax laga qabanayo/cidda wax loo qabanayo. Laakiin xaalka markaas jira iyo dhibaatooyinka ka hor imaanayaa waa in aysan beddelin macnaha asalka ah ee aragtida hawlaha samafalka. Waa aragti macna ahaan qabta in la iska iloobo kala xulashada siyaasadeed. Manta waxaa na hor yaal jahawareer iyo madmadow ku jira waxa loogu yeeray: “hawlaha samafal ee militari”. Waa in aan si cad oo xoog leh u caddaynnaa mabaadii`deenna ah: “hawlo samafal madaxbannaan oo rayid ah”. Sidaas darteed waa in aan dhaleecaynnaa faragalinta waxa loogu yeeray: Samafal Military”. Samafalka beni`aadmino wuxuu u jiraa in uu “naf badbaadiyo”, ee uma jiro in uu “naf tirtiro”. Hubkeennu waa “xisaabtan iyo qarsoodi la`aan”, sida aan mugdi ugu jirin ujeeddadeenna, kuwaas oo aan ka macno yarayn dawooyinkeenna iyo qalabkeenna qalliinka. Hubkeennu ma noqon karo dayuuradaha wax duqeeya iyo dabaabaadka dagaalka, xitaa haddii kuwaas isticmaalkoodu uu mararka qaarkood lagama maarmaan u yahay fulinta hawlaheenna. Samafalka aadaminimo ma ahan military, militariguna ma ahan samafal. Isku mid ma nihin, nalooma arki karo inaan isku mid nahay, nalakamana dhigi karo inaan isku mid nahay! Sida cad taas ayaa sabab u ah in aan diidno in ay na maal galiyaan wadamada ku jira ururka NATO markii aan hawlaheenna aan ka fulinaynnay Kosovo. Waana sababtaas tan aan u dhaleecaynnay waagaas, haddana u dhaleecaynaynno samafalka habowga ah ee NATO. Sidoo kale waa sababtaas sababta aan uga dhinac shaqaynnaynno ciidamada laakiin aanan marna u hoos imanayn taliskooda.